पोखरा फाइनान्सको ८.२६ प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजन, कतिमा खुल्यो कारोबार ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
पोखरा फाइनान्सको ८.२६ प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजन, कतिमा खुल्यो कारोबार ?
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्सको ८.२६ प्रतिशत बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि यो फाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १३५.७८ रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार पोखराको सेयर कारोबार पनि यही मूल्यलाई आधार मानेर खुलेको छ । यसको औसत आधार मूल्य भने १८९.८९ रुपैयाँ छ ।
पोखरा फाइनान्सले असार ५ गते बस्ने वार्षिक साधारण सभामा ८.२६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पेश गर्दैछ । यसका लागि कम्पनीले आइतबारदेखि बुक क्लोज गरेको हो । सभामा संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सञ्चालकको निर्वाचन पनि हुनेछ ।
फाइनान्सले हाल कायम ७५ करोड ४१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ८.२६ प्रतिशत बोनस दिन लागेको हो । बोनसपछि पुँजी ८१ करोड ६४ लाख ४९ हजार ३४९ रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ६ करोड ५३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
२०७५ जेठ २७ गते प्रकाशित